Kooxda Man United Oo Ka Fiirsanee In Heshiis Cusub U Kordhiso Bissaka Iyo Booskii Ay Ku Bedeli Doonaan Daafac Cusub
HomeHoryaalka IngiriiskaKooxda Man United oo ka fiirsanee in heshiis cusub u kordhiso Bissaka iyo booskii ay ku bedeli doonaan daafac cusub
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso inay hesho daafac midig oo cusub bisha Janaayo si oo ula tartamo Aaron Wan-Bissaka.
23 jirkaan daafaca ka ciyaara ayaa qaab ciyaareed daafac ah ku soo jiitay kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska tan iyo markii uu ka soo laabtay Crystal Palace sanadkii 2019, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku dhibtooday inuu gacan ka geysto dhanka weerarka.
Sida laga soo xigtay ESPN, kooxda Ole Gunnar Solskajer ayaa aaminsan in Wan-Bissaka uu ka maqan yahay tartan uu ku bilaabo booskiisa isla markaana ay doonayaan inay la soo saxiixdaan daafac midig oo cusub oo Old Trafford ah suuqa kala iibsiga xagaayga soo socda.
Warbixinta ayaa soo jeedineysa in kooxda heysata 20ka jeer horyaalka Ingariiska inay ku rajo weyn yihiin in ciyaaryahan cusub uu ‘dardar galiyo horumarka hormar ka helaan kooxda qaarada Yurub.
Wan-Bissaka wuxuu u ciyaaray Red Devils 58 kulan tan iyo imaanshihiisii, si kastaba ha ahaatee, wuxuu dhaliyay kaliya hal gool afarna wuu caawiyay, halka uu kaliya afar caawin sameeyay 46 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisii ​​hore, Crystal Palace.
Diogo Dalot ayaa haatan amaah kula jooga kooxda ka ciyaarta Serie A-da ee AC Milan, laakiin Red Devils ayaa la sheegayaa inaysan xiiseyneynin inay iska iibiyaan daafaca midig madaama ay kalsooni ku qabaan inuu horumar ka sameyn doono kooxda koowaad sannadaha soo socda.